Metal Gear Survive, lalao voalohany amin'ny vanim-potoana taorian'ny Kojima | Vaovao momba ny gadget
Metal Gear Survive, ny voalohany tamin'ny vanim-potoana taorian'ny Kojima izay nanangana sisin-tany henjana
Alahady tolakandro dia tsy misy fotoana tsara kokoa hiarahana amin'ny konsol. Androany dia te hiresaka momba ny Metal Gear Survive izahay, ny lalao izay nambaran'i Konami ary izany dia miteraka adihevitra lehibe momba ny fidiran'i Kojima amin'ny saga ary ny antony nanombohana ity lalao ity izay tsy misy ifandraisany firy na amin'ny hafa. marika Amin'ity indray mitoraka ity dia miatrika fanafihana zombie isika, miaraka amina lohahevitra feno frenetika kokoa ary tsy mifantoka amin'ny fitsikilovana, Ny Metal Gear Survive dia miteraka hatezeran'ireo mpankafy ilay saga. Atolotray anao ny lalao Metal Gear Survive hahafahanao manapa-kevitra samirery.
Ny sary dia tsy mahavariana, tsy mihoatra ny kinova farany an'ny Metal Gear ihany koa izy ireo. Na izany aza, ny zavatra tsikaritra dia ny tsy fisian'ny tanan'i Hideo Kojima amin'ny fanaovana ny lalao. Mifantoka mazava amin'ny multiplayer marobe, afaka mivezivezy amin'ny tontolo malalaka isika ary maniry ny ho tafavoaka velona, ​​araka ny asehon'ny lohatenin'ny lalao. Tsy maintsy hiara-hiasa amin'ny tsirairay isika na hanao ady samirery, fa ny masontsika kosa dia ny masontsika foana. Mikasika ny fitaovam-piadiana sy ny typology ady, mazava ho azy fa kopian'ny karbonina Metal Gear V: Phantom Pain.
Ny fireharehana ara-teknika no azontsika antenaina amin'ity lalao ity, na izany aza, toa lavitra ny andrasan'ny mpampiasa amin'ny lohateny misy ny anarany hoe Metal Gear. Ny asa fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminay sy ireo tsy misy dikany amin'ny fidirana an-tsokosoko sy ny teknikan'ny ady dia ny mololo farany ho an'ny purista indrindra amin'ny lalao video. Na izany aza, Izahay dia nitondra anao ny lalao tany am-boalohany avy amin'ny YouTube mba hahafahanao manapa-kevitra samirery raha toa ka izany no antenainao avy amin'ny Metal Gear, na raha miombon-kevitra amiko ianao fa i Konami dia tokony hamela ny saga ho faty amin'ny Metal Gear V.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Metal Gear Survive, ny voalohany tamin'ny vanim-potoana taorian'ny Kojima izay nanangana sisin-tany henjana
Inona ny smartphone namboarina ary aiza no hividianana azy io soa aman-tsara?
Tsy mitsahatra mandroaka ny mpiasa ao aminy i Microsoft, anjaran'ny mpiasa Skype izao